Creativeo – orinasa sosialy manolotra fiofanana mikasika ny fampivoarana ny maha-olona – Blaogin'i Voniary
Creativeo – orinasa sosialy manolotra fiofanana mikasika ny fampivoarana ny maha-olona
Tonga indray ny fiofanana mitondra ny lohahevitra hoe « Ny fiadanana sy fahatoniana dia miantomboka avy ao anaty”, izay atolotry ny Creativeo ny 18 Mey 2019 izao manomboka amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 4 ora ao amin’ny Koon Training Ambatonakanga. Efa nentina teto ny andinindininy momba io fiofanana io, izay miompana indrindra amin’ny Ho’oponopono, tamin’ny andiany voalohany. Anio kosa, ndeha hofantarintsika bebe kokoa ny mikasika ny mpirakaraka, izany hoe ny Creativeo.
Creativeo – miara-mamiratra isika
Ny Creativeo dia tetikasa mifototra amin’ny fampivoarana ny maha-olona nitsangana tamin’ny volana Novambra 2017. Nathalie Roberdison no mpanorina azy, tovovavy vao 22 taona izy tamin’izany.
Misehatra ao anatin’ny ny tanjona lovainjafy laharana fahaefatra napetraky ny firenena mikambana ny Creativeo, izany hoe ny fanabeazana ho an’ny rehetra. Nosafidin’ny mpanorina manokana ny ikatroka eo amin’ny sehatry ny ny fampivoarana ny maha-olona satria io no tena fototry ny fanabeazana. Izany indrindra no itondrany ny teny filamatra hoe “miara-mamiratra isika”. Noho izany, manatanteraka vela-kevitra sy fampiofanana momba ny fampivelarana ny maha-olona no lahasa fototry ny Creativeo.
Hatramin’izay erintaona mahery niorenany izay dia efa maro ireo nisitraka ny fiofanana natolotry ny Creativeo, indrindra ny tanora. Mbola tetikasa aloha no iantsoana azy hatramin’izao, saingy maminavina ny hamadika ny Creativeo ho orinasa sosialy i Nathalie Roberdison ary efa eo an-dàlam-panatanterahana izany mihitsy. Amin’ny maha orinasa sosialy azy izay dia atontona amin’ny fanatanterahana fiofanana amin’ny sarany takatry ny sarambabembahoaka ny ampahany amin’ny vola azo amin’ny hetsika sy fampiofanana tontosain’izy ireo.
Fiofanana Ho’oponopono andiany faharoa
Amin’ny Sabotsy 18 Mey izao ary, manomboka amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 4 ora dia hanolotra ny fiofanana « Ny fiadanana sy fahatoniana dia miatomboka avy ao anaty” andiany faharoa ny Creativeo. Ao amin’ny Koon Training, rihana voalohany eo ampitan’ny Jirama Ambatonakanga no hotanterahina izy io. I Nathalie Roberdison, filoha mpanorina, izay nandalina manokana momba ny Ho’Oponopono ary efa nampihatra izany nandritra telo taona no hizara ny traikefany mandritra io fotoana io.
“Koa manentana antsika rehetra ho tonga! Hohitanao ao ny fomba fampivoarana ny maha-ianao anao, izany hoe miainga avy aminao izany fa tsy avy amin’ny olon-kafa! Santatra am-bavarano ihany ny hetsika eto Antananarivo fa vinavinanay ny hitondra ny Ho’Oponopono manerana ny Madagasikara.”
Ireo mpandray anjara tamin’ny fiofanana Ho’oponopono andiany voalohany
cc : Creative
Betsaka tokoa ny mpandray anjara tamin’ny andiany voalohany ary mbola maro noho izany no andrasana amin’ity indray mitoraka ity ka izay no nahatonga ny mpikarakara nanomana hefitra lehibebe kokoa. Koa aza misalasala ary manoratra anarana dieny izao ao amin’ny pejin’ny Creativeo, na miantso ny 034 08 078 66.
Creativeo, développement personnel gasy, fampivelarana ny maha-olona, fampivoarana ny maha-olona, fiadanam-po, Ho'oponopono Madagascar, Nathalie Roberdison
Vela-kevitra – Ny Malagasy sy ny lanjan’ireo taratasy ara-panjakana
Vatana, fo sy saina ary fanahy: iza no omen-danja?